ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အဆင့်များနှင့်အခြားအရာများ! | Dogs World
သင့်ခွေးကိုကိုယ်ဝန်ရရန်စောင့်နေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်သူသည်မကြာမီသူသည်ခွေးပေါက်စများသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်သေချာစွာသိလိုပေမည်။ သင့်ကိုကူညီရန်ငါခွေးများ၏ကိုယ်ဝန်တိုးတက်မှုနှင့်သင်မွေးဖွားသောသူငယ်ချင်း၏အခြေအနေကိုညွှန်ပြမည့်လက္ခဏာများသည်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ငါ့ခွေးကိုယ်ဝန်ရှိမရှိဘယ်လိုသိရမလဲ။
သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရုံသာမက သင့်ခွေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသိနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခွေးများအတွက်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများရှိပါသလား၊
1.2 အမူအကျင့် / စရိုက်ပြောင်းလဲမှုများ
3.3 တတိယအဆင့်: ပေးပို့
သင်ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်များတွင်သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ကိုသိရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်းအသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်သင်ရှိသည်။ ဒါတွေဟာ
ခွေးတစ်ကောင်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လာသောအခါသူမရင်သားတွင်အသိသာဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား သူတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်ခွေးပေါက်စများရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှအရွယ်အစားကြီးလာမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပြီးကလေးငယ်များအတွက်အလွန်အာဟာရဖြစ်စေမည့်နို့ကိုမွေးဖွားပြီးနောက်တွင်ပထမဆုံးအစားအစာအဖြစ်အသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ ပြီးတော့သူမရဲ့နို့သီးခေါင်ကပန်းရောင်ပြောင်းလာတာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့မြင်ရမှာပါ။
အကယ်၍ သင်၏ခြေလေးချောင်းရှိသောအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသည်အခြားခွေးနှင့်မျိုးပွားခြင်းမပြုပါကသူမ၏ရင်သားများရောင်လာကြောင်းသင်တွေ့မြင်ပါကသူမ၌စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်နို့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပြီးနိုးနိုးကြားကြားရှိစေနိုင်သည်။ သူမကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမ ၀ င်လာစေရန်တားဆီးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့မင်းကသူမကိုမိခင်တစ် ဦး မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်သူမရဲ့ဓားမြှောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ပဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွေး၏ဗိုက်သည်ကြီးလာမည်၊ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဤပြောင်းလဲမှုသည်အခြားသူများထက် ပို၍ သိသာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သေးငယ်သောသို့မဟုတ်အလတ်စားမျိုးပွားခွေးများတွင်များသောအားဖြင့်အရွယ်အစားကြီးသောခွေးများထက် ပို၍ တွေ့ရသည်။ ဒါကလူငယ်တွေကြီးထွားလာတာသာမကဘဲဒါကြောင့်သူတို့မှာနေရာပိုလိုလာတာပေါ့။
သင်၏ခွေးသည်ပန်းရောင်သို့မဟုတ်ကြည်လင်သောအရည်ကိုဖိတ်သည်ကိုသင်တွေ့ပါကမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ သန္ဓေသားသည်သူတို့မမွေးမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သန္ဓေသားလောင်းကိုကာကွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ သူမသတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်မတိုင်မီရှည်လျားသောသွေးကိုထုတ်ပေးလျှင်နောက်ထပ်အလွန်ကွဲပြားသောပြissueနာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသားစဉ်မြေးဆက်များ၏လေးနက်သောပြtalkingနာအကြောင်းပြောခြင်းကြောင့်မွေးမြူရေးဆေးကုသမှုကိုအရေးတကြီးလိုအပ်သည်။
ခွေးတစ်ကောင် (သို့မဟုတ်ခွေး) ၏ပုံမှန်အပူချိန်သည် ၃၇.၈ မှ ၃၉.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ပေးပို့သည့်အခါ၎င်းသည် ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်သို့ကျသွားပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ခွေးပေါက်စနှင့်မိခင်အတွက်ပါအကောင်းဆုံးနှင့်မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်မွေးဖွားရန်ပြင်ဆင်သည်။
အမူအကျင့် / စရိုက်ပြောင်းလဲမှုများ
ကိုယ်ဝန်ခွေးမကြာခဏပြသလျက်ရှိသည် အများကြီးလျော့နည်းတက်ကြွ သူတို့အမျိုးအနွယ်ကိုမျှော်လင့်မထားသည့်အခါထက်။ သူသည်သူ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပြောင်းအလဲကိုသတိထားမိလျှင်၊ သူသည်အနားယူရန်အချိန်ပိုသုံးသည်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်သို့မဟုတ်ကစားရန်ဆန္ဒအလွန်မခံစားရပါကသူသည်အခြေအနေရှိနေသည်ဟုသင်သံသယဝင်နိုင်သည်။
သငျသညျမတ်ေတာဆက်လက်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်သူသည်သင့်ထံမှအချိန်ကြာမြင့်စွာခွဲထားခြင်းကိုမခံလိုသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ သင်နဲ့အတူအခြားခွေးတွေဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးကိုအချိန်ဖြုန်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်သိရန်ကူညီနိူင်သည့်နောက်ထပ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင်မြင်ရလျှင်ဖြစ်သည် nests »ရှာဖွေခြင်းအထူးသဖြင့်အချိန်သတ်မှတ်ထားသောနေ့စွဲ။
သင့်ခွေးတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်၊ ပဌမလတွင်သင်စားဖူးသည်ထက်၊။ ဒါကြောင့်သူမမှာစာစားချင်စိတ်နည်းတာရှိမရှိသိဖို့သူ့ကိုရက်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ပါ။ သူတစ်နေ့လုံးအနည်းငယ်သာစားနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
တစ်ခွေး၏ကိုယ်ဝန်ကာလအကြားကြာရှည် ၄ ရက်နှင့် ၆ ရက်, သို့သော်၎င်းသည် ၇၀ ပင်ကြာနိုင်သည်။ သို့တိုင်၊ ရက်ပေါင်း ၅၈ (တစ်ရက်၊ တစ်ရက်မပြည့်သေး) မှသင်ပို့ဆောင်ချိန်ရောက်လာသောအခါသင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတိတ်ဆိတ်သောအခန်းတစ်ခန်းရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မည်။ မိသားစုနှင့်အနည်းငယ်ဝေးသော၊ သက်သောင့်သက်သာအိပ်ရာ၊ ရေနှင့်အစားအစာများနှင့်အတူ။
ဤအဆင့်တွင်သားဥအိမ်ကိုသန္ဓေတည်။ သန္ဓေသားလောင်းကိုသားအိမ်နံရံနှင့်တွဲဖက်ထားသည် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အရိုးများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ခြောက်ပတ်လောက်ကြာတယ်
အနာဂတ်လူ့မိခင်များ, အမျိုးသမီးခွေးနှင့်ဝသကဲ့သို့ သူတို့ကနံနက်ယံ၌မူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်အသည်းခံစားရပေမည်, ဒါကြောင့်သူမရဲ့ကိုယ်ဝန်ဗိုက်အနိုင်နိုင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေမယ့်, သင်နေ့က 22 ကနေ VET မှခေါ်ဆောင်သွားရန်သင့်အားအားပေးလိမ့်မယ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤဒုတိယအဆင့်တွင်သန္ဓေသားလောင်းများသည်သန္ဓေသားဖြစ်လာသောအခါ၊ နီးပါးအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးခွေးပေါက်စ။ ကိုယ်ဝန်ကုန်ခါနီးတွင်သူတို့၏အလောင်းများသည်မိခင်၏သားအိမ်ပြင်ပတွင်နေထိုင်ရန်အလုံအလောက်ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သော်လည်းအရိုးနှင့်ကြွက်သားများမပြီးမချင်းခြောက်လမှတစ်နှစ်အထိ (သူတို့အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍) ဆက်လက်၍ ရှိနေ ဦး မည်။ ။
ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသင့်ရဲ့ခွေး အာရုံကြောသို့မဟုတ်နာမငြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကလေးငယ်များကိုမွေးဖွားရန်အကောင်းဆုံးနေရာကိုမတွေ့မချင်းမြေကြီးကိုခြစ်ရာသို့မဟုတ်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သေးငယ်သောသို့မဟုတ်သေးငယ်သောမျိုးပွားမှုဖြစ်သော chihuahua (သို့မဟုတ်) ခွေးဘီလူးဖြစ်လျှင် cesarean အပိုင်းအတွက် VET သို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြနာများပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး.
လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ခွေးများအတွက်ကိုယ် ၀ န်စစ်ဆေးမှုသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး တောင်းဆိုနိုင်သောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ကွဲပြားသည်။ ခွေးဖြစ်လျှင် ဒါပိုစျေးကြီးတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
X-Ray ဆိုသည်မှာ၎င်းကိုအတည်ပြုရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းသည်ပြည်နယ်အတွင်းမည်မျှကြာသည်ကိုခန့်မှန်းရန်ထက်နည်းသောနည်းကိုသိရန်ကူညီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ပို့ဆောင်မည့်ရက်ကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကဥဥမှမျိုးပွားခြင်းရှိမရှိနှင့်ခွေးကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်သူအားသိရှိစေလိမ့်မည်။ ဒါဟာသက်သေပြ အဲဒါကို ၂၀ ရာစုကစပြီးလုပ်ဆောင်ရမယ်ရလဒ်မတိုင်မီကတည်းကနိဂုံးချုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးသွေးကိုရရှိပြီးပလာစမာသည်ကွဲသွားသည်။ ၎င်းသည်သတင်းကောင်းရှိပါကညွှန်ပြသည့်အရာဖြစ်သည်။
ခွေးကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုကိုယူပြီးမကြာမီအိမ်၌ဆံပင်အသေးများရှိလိမ့်မည်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ် ၀ န်ခွေးကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့လုပ်ရမယ့်အရာကအဲဒါကိုပေးရမယ် အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးအစားအစာအသား၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်း (အနည်းဆုံး ၇၀%) နှင့် ဒီလိုမျိုး. ထို့ကြောင့်အနာဂတ်မိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးသည်သူတို့လိုအပ်သောအာဟာရများရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာစေမည်။
ထိုသို့လည်းအရေးကြီးပါသည် သူမလမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြပါစို့။ သူသည်ကိုယ် ၀ န်ရှိသော်လည်းပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်လိုအပ်နေသေးသည်။ အခြားခွေးများ၊ လူများ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည် အချစ်များစွာ။ ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုမနပ်ပါရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ခွေးပေါက်စများကိုလည်းထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီတော့မင်းရဲ့ခွေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေလားဆိုတာမင်းကိုကူညီပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူပါတယ်; ပြီးတော့သင်ကံကောင်းပါစေမလုပ်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့။ နောက်တစ်ခုသေချာသွားမှာပါ။ 😉။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ငါ့ခွေးကိုယ်ဝန်ရှိမရှိဘယ်လိုသိရမလဲ
65 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါ့ခွေးပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ သူမပြန်လာပြီ။ ဒါပေမယ့်သူမအရင်ကလိုမကစားတော့ဘူး။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပြောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်အအေးခန်းတစ်ခုလားဆိုတာသေချာအောင်ဘာလုပ်သင့်လဲ။
ငါ့ခွေးကငါတို့ဆီကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေလားမသိဘူး၊ သူမမှာကြီးမားတဲ့ပန်းရောင်နို့သီးခေါင်းရှိပေမယ့်ဝမ်းဗိုက်မှာဘာမှမရှိဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ အမြန်ဆုံးအဖြေကိုစောင့်ပါ။
Ehhhhhh ... တတိယလ??!?!? (ခွေးများတွင်ကိုယ်ဝန်သည် ၆၀ မှ ၆၂ ရက်ဖြစ်သည်။ သုံးလသည်ကိုးရက်ဖြစ်သည်)
သူတို့ကကျွန်တော့်ခွေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကသူတို့တပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ သူကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအစာစားနေပေမဲ့သူမကိုယ်သူမကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူမစျေးကြီးချင်တယ်ဆိုရင်သူမကစားချင်တယ်၊
Ana Orellana ဟုသူကပြောသည်
ငါ podu paraja ရှိတယ်ဒါပေမယ့်သူတို့အကြိမ်ကြိမ်ကူးခဲ့ပေမယ့်ငါ့ခွေး testiculu တစ်ခုတည်းရှိသောကြောင့်, ငါ့ခွေးကိုကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်
ငါ့ခွေးမှာသူမပန်းရောင် pesones တွေရှိပြီးသူတို့ဘယ်လောက်များများရပ်တန့်ပြီးသွားလဲ၊ မင်းရဲ့အဖြေကိုငါစောင့်နေတယ်
ana orellana မှစာပြန်ပါ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ခွေးဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးရက် ၅၀ လုံးလုံးအစာမကြေနိုင်တော့ဘူး၊ ပုံမှန်ပါပဲ၊ သူမဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ကိုငါကြောက်သလား။ သူမရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေကသာကြီးထွားလာပေမဲ့အရမ်းနည်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန်ကိုသူတို့တပ်ဆင်ထားသည်။ အကယ်၍ ဤကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးသည်အချိန်အကြာကြီးအိပ်ချင်နေပြီးကစားခြင်းမရှိတော့လျှင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမျှမဆိုပါကသူမအခန်းထဲကိုအသည်းအသန်ဝင်လို။ ၊ သူမကိုယ်ဝန်ရှိသလား
ငါမိန်းမရှိတယ်။ အထီးကသူမကို ၄ ကြိမ်စီးခဲ့ရတယ်၊ သူမဆက်နေသေးလားဆိုတာငါမသိဘူး။ ပထမတောင်သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဆက်နေမည်လားမသိရန်အလွန်စိုးရိမ်သည်။ ဤအချိန်၌သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သောလက္ခဏာများရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါ Ultrasound ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်သလဲ
သင်သောက်သောခွေးတို့၏ခြေသည်းများကိုကြားနာရန် Vet သို့သွားရမည်
ကျွန်ုပ်ခွေးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကထူးဆန်းသည်၊ ၎င်းသည် preniara အတွက်ပေးချေသည့်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်ဆက်ဆံခဲ့ရသည်၊ ၄ ရက်အတွင်း ၁၆ ကြိမ်ခန့်ပေးခဲ့သည်၊ ကွဲပြားခြားနားစွာပြုမူသည်၊ သူမကစား၊ အိပ်ပျော်လိုသော်လည်းသတိမထားမိ အဆိုပါ pansa devo, တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်ပူမိနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ပါပဲလျှင်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Samoyed ခွေးဟာ Samoyed ခွေးကလေးနဲ့လမ်းဖြတ်ကူးပြီးကတည်းကသူမနို့ကိုနို့တိုက်ပြီး ၆၃ ရက်ကြာမှ၊ သူမစားမစားဘူး၊ သူမဘေးမှာတစ်ယောက်ရှိရင်သူမအိပ်ပြီးကတည်းကကျွန်မရဲ့ Samoyed ခွေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသိဖို့လိုတယ်။ သူမ၏ဝမ်းကိုခြစ်ရာ .... ဘာလုပ်ရမှန်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ rotwailer ခွေးဟီလီကသူမကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ချစ်သူခွေးမလေး၊ သူတို့ကသူမကိုနှစ်ပတ်လောက်လမ်းလျှောက်တယ်။ သူမပုံမှန်ထက်ပိုပြီးစားတယ်။ ဗိုက်နည်းလာတယ်။ နို့သီးခေါင်းကပိုကြီးတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ငါ့ခွေးမှာစိတ်ပညာကိုယ် ၀ န်ရှိပြီ။ ဒီဇင်ဘာလမှာသူမရည်းစားရဲ့အိမ်မှာပဲနေခဲ့တယ်။ ဒီလဟာဒေါက်တာကသူမကို ultrasound မပေးဖို့ပြောတယ်။ နို့သီးခေါင်းတွေကြီးထွားလာပြီးသူတို့ဝမ်းဗိုက်ခွဲခြားပုံကိုပါ။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်အဖြစ်အရှည် ??? ကူညီကြပါ!!!
ငါ့ခွေးသည်ကိုယ်ဝန်ရှိရန်လိုလိမ့်မည်။ ယောက်ျားကသူ့ကိုတပ်ဆင်ထားသည်၊ သို့သော်သူမ၏ဝမ်းဗိုက်သည်သိသိသာသာမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်လား။
Brendu လူစီယာကက်စထရို ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ခွေးကသူ့ဝမ်းထဲမှာအလင်းရောင်အစက်အပြောက်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့သူတို့ကအမည်းရောင်ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါသင်္ကေတဟုတ်လားမသိဘူး ...
Lisbeth Villasmil ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် pincher lucero ကိုငါးကြိမ်စီးခဲ့တယ်
lisbeth villasmil အားပြန်ပြောပါ
ယေရှု pineda ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ခွေးကိုသူမ2ကြိမ်တပ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကတိတ်တဆိတ်မနေခဲ့ကြပေမယ့်ခွေးသူမ၏အတွင်း၌သုတ်ရည်လွှတ်သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်
သခင်ယေရှု pineda ကိုပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောသုံးလကကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမ၏အင်္ဂါရပ်များမထွန်းကားသေးပါ။ ၎င်းတို့ကိုထမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်၊ သူမသည်အမေရိကန်စတန်းဖို့ဒ်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏လှေလှော်စီးသူသည်တစ်လနှင့်နှစ်ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မတွေ့နိုင်ပါ။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ ။ အလားတူပဲအိုးဗိုက်ကိုတွေ့ရင်ငါ့ဆီကိုငါလှိမ့်သွားတယ်။ နားမလည်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့လည်စာစားပွဲမှာတစ်ပတ်နေပြီးခွေးနဲ့အတူတစ်ပတ်နေပြီးခြောက်ကြိမ်လောက်ဖုံးအုပ်ခဲ့ပြီးသူမစားချင်လို့စားနိုင်တာမို့မနက်ဖြန်မနက်ဖြန်မနက်ဖြန်မနက်ဖြန်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သူမသာမန်ထက်ပိုအိပ်လျှင်ဒုတိယလနှင့်ပထမမှ စ၍ သူမသည်နို့သီးများကြီးထွားလာသော်လည်းကျွန်ုပ်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေမနေထိုင်သည်ကိုမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ငါ့ခွေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေလားမသိဘူး။ သူမရင်သားတွေရောင်နေတယ်၊ ​​သူမတွေအများကြီးစားပြီးတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်
သူပြောတာကသူမကိုယ်ဝန်ရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ vet ကဒါကိုအတည်ပြုပေးလိမ့်မယ်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌သူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်းကိုငါသိ၏အဖြစ်ငါ့ခွေးတစ်ချိန်ကတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်
ကံမကောင်းစွာပဲမကြာမီလူသိများမရနိုင်ပါ။ ၂ ပတ်လောက်စောင့်ရတယ်။
thalia နေ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့သစ်တော်သီးတွင်အောက်ပိုင်းလေးခုရှိသည်။ နို့ရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူယခင်ကကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ။
sol thalia အားပြန်ကြားပါ
တခါတရံသူကခွေး၌ဖြစ်ပျက်။ ၎င်းသည်ဟော်မုန်းမညီမျှမှုဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည်ကိုယ် ၀ န်ရှိသူများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဝမ်းဗိုက်ရောင်ခြင်း၊ ရင်သားတိုးခြင်းနှင့်နို့ထွက်ခြင်းစတင်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ခွေးအားအထီးကစီးနင်းခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အစာအိမ်ကိုပြန်လာသည့်အခါယနေ့ပုံမှန်လား။
သူမသည်အလေးချိန် ၅၀ ပေါင်ရှိသည်။ ခွေးမည်မျှရှိမည်နည်း။ သူမပထမဆုံးအကြိမ်လား။
ဟုတ်တယ်၊ ပုံမှန်ပဲ🙂။ သူမမှာခွေးပေါက်စ ၆-၈ ယောက်ရှိနိုင်တယ်။ X-Ray မပြီးမချင်းသင်သေချာမသိဘူး။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းမှာခွေးကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ငါဖြတ်ခဲ့ရတယ်၊ သူမဟာရက် ၄၀ နီးပါးကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်သူမအစာမစားချင်တော့ဘူးဆိုတာငါစိုးရိမ်တယ်၊ အနည်းငယ်သာစားသည်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
မင်္ဂလာပါ Mildred ။
ပုံမှန်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်ရောက်သောအခါငါအနည်းငယ်သာစားသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သူမကိုစိုစွတ်နေသောခွေးများစိုစွတ်သောအစားအစာများပေးခြင်းဖြင့်သူမကိုစားရန်တိုက်တွန်းနိုင်သည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သူမသည်မတော်မလျော်ဖြစ်နေသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊
ဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲ။ သင်ကိုယ်ဝန်မရှိပါကသင်နေထိုင်နိုင်သည်၊ ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခွေးတွေကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးသူငိုသည်။ သူ၌ဘာရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ မနေ့ညကသူသည်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည်ရက်အနည်းငယ်ကြာလမ်းလျှောက်နေခဲ့သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား။
အများဆုံးဖွယ်ရှိဟုတ်ကဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမငိုနေတာကိုတွေ့ရင်မင်းကိုသူမကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားမှာပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအချို့တွင်သင်အဆင်မပြေမှုသို့မဟုတ်နာကျင်မှုခံစားရနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ သင်သည်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီလားသိရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါတို့စောင့်ရမယ်။
တစ်ခုတည်းသောအရာ - သူမကိုသူမအိပ်တာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သူမသည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုစားနေသည်။ သို့သော် ၁၄ ရက်မပြည့်ခင်အထိသင်သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့မှာခွေးတစ်ကောင်ကိုငှက်တစ်ကောင်ကိုထည့်ထားပေမဲ့အပူရှိန်နဲ့တူပေမယ့်အရည်ကသွေးမဟုတ်ဘဲ bulpa ထဲ၌အရည်တစ်ထွက်ထွက်လာသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အကြံမပေးပါနှင့်၊ သင့်တွင်ခွေးပေါက်စလေးကောင်သို့မဟုတ် ၃ ကောင်ရှိနိုင်ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့စောင့်နေတုန်းပဲ။ သူမမှားနေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကသူမအား Vet သို့သွားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ultrasound မယူပဲခွေးဘယ်လောက်ကျန်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ မော်နီကာ၊ ငါမင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ်၊ ငါ့ခွေးက အကောင်သေးသေးပဲ၊ ငါ သူ့ကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းဆီ ခေါ်မလားမသိဘူး၊ ငါ့မှာ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာကို အရမ်းကြောက်နေတယ်၊ ​​ခွေးမ၊ မင်း ငါ့ကို ဘာပြောရမလဲ။ ငါ သူ့ကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုမပို့ရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဦး။
မင်းခွေးဘာမှားနေတာလဲ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်မည်သည့်ပြcomplနာမျှမရှိပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအကြံပြုပေမယ့်မဖြစ်မနေပါ။
အကယ်၍ သူသာပုံမှန်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသူမကအဆင်ပြေလျှင်၊ မစိုးရိမ်ပါနှင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကလမ်းမှခွေးတစ်ကောင်ကိုကျွန်ုပ်ကယ်နိုင်ခဲ့ပြီးခွေးတစ်ကောင်ကသူမကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသူမကိုအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အားကုသနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ယခုသူမကျန်းမာနေသေးသည်။ သို့သော်သူမသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်ပြီးအလွန်အိပ်ချင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမလမ်းပေါ်မှထွက်လာပြီးသူမနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသေးသော်လည်း ၂ ပတ်ခန့်ကုန်လွန်သွားသောအခါသူမအိပ်ပျော်နေသောသို့မဟုတ်အိပ်နေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ မနေ့ကငါသူမ၏ရင်သားများသူမကရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းနှင့်သူမအများကြီးအစာစားချင်စိတ်မရှိဘဲ, သူမ၏ခွေးအစားအစာကိုသာပေမယ့်သူမနည်းနည်းစားသောက်ခြင်းနှင့်ရေအများကြီးသောက်သုံးသည်ထက်ပိုမို rosy ဖြစ်ကြောင်းသူမကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မနေ့ကငါသဘောပေါက် အကယ်၍ သူသာဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင်၊ သူသည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဒဏ်ရာများကိုကုသရန်ветеринарияမှပေးသောပantibိဇီဝဆေးများသည်ခွေးများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။
Camilo Pereira ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်မရဲ့ခွေး Tina ကလွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ကသူမကိုလှည့်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမ (၇) လသားအရွယ်ရှိပေမယ့်အနည်းငယ်ထူးဆန်းတာကတော့ပျို့အန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Camilo Pereyra အားပြန်ပြောပါ
ကျနော့်အကြံဥာဏ်ကသူမကိုဆေးစစ်ဖို့ VET ဆီခေါ်သွားဖို့ပါ။
မင်္ဂလာပါမော်နီကာ၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပြီးခွေးနှင့်ခွေးတစ်ကောင်၏ကုသမှုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ သူမနှင့်၎င်း၏ခွေးပေါက်စများ၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရန်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါဘာတွေလေ့လာသင့်သလဲ သင်၏အဖြေသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွေးတစ်ကောင်သည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနှင်းမမိုးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ သူကတစ်ချိန်ကအဆက်အသွယ်သို့ရောက်လျှင်မူကား, ဘာမျှမဖြစ်; ဟုတ်တယ်၊ ဒါဆိုရင်ခွေးလှောင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်တွေမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့သဘာဝဆေးမတိုက်ဆေးကိုသုံးပါ။
သူမနှင့်ခွေးပေါက်စနှစ် ဦး စလုံးသည်ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန်အတွက် Acana, Orijen, True Instinct High Meat, the Wild of Taste စသည်ဖြင့်သီးနှံများနှင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများမပါသည့်အရည်အသွေးမြင့်အစာကျွေးရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ။
Vet မှကလေးငယ်များ၏တိုးတက်မှုကိုကြည့်ရှုရန် ultrasound နှင့် X-Ray ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
Lizbeth Escarcega ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည် chihuahua ရောနှောနေသော pug နှင့်အခြားခihuahuaသည်သူမကိုအကြိမ်များစွာစီးနင်းခဲ့သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်နှင့်မည်သို့သူမကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း။ သူတို့ကသာမန်လူသားအစားအစာကိုကလေးငယ်အဖြစ်စားလေ့ရှိကြသည်။ ငါဒီလိုမျိုးအစာတွေဆက်လုပ်လို့ရမလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူ့ခွေးစာကျွေးဖို့လိုသလား။
Lizbeth Escarcega အားစာပြန်ပါ
sylvania seletina perez veras ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ခွေးမှာဝမ်းဗိုက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေလားမသိဘူး၊ ခွေး ၂ ကောင်၊ အထီးနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမပတ်ပြေးပြီးရပ်တန့်မသွားဘဲတစ်နေ့လုံးဆာလောင်နေတယ်။
sylvania seletina perez veras အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ VT ကငါ့ခွေးကအ ၀ လွန်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကကလေးမွေးဖို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။
Hernan ESPIN ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ Shely က Labrador တစ်ယောက်ပါ။ မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာသူမမွေးဖွားခဲ့ဖူးတယ်၊ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းသိဖို့ VET ဆီကိုသွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။
HERNAN ESPIN သို့စာပြန်ပါ
ငါ့ခွေးအတွက်မင်္ဂလာပါ။ ချားဟွာဟွာကသူမကိုသုံးကြိမ်စီးပြီးထုံးတယ်။ သူမမှာကိုယ်ဝန်ရှိသလား။
ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အတည်ပြုရန်နှစ်ပတ်ကြာလိမ့်မည်။ 🙂
ကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်သူ၊ ကျွန်ုပ်မှာအလတ်စား poodle ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်မောင်နှမများ၊ မောင်နှမများ၊ အထီးကအမျိုးသမီးကိုတပ်ဆင်ပြီးခွေးသုံးကောင်နှင့်ကိုယ်ဝန်ရခဲ့သည်။ သူ့မှာနောက်ထပ်ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ရှိပြီး ၃ လပဲရှိပါသေးတယ်။ သူမအစ်မကိုအတူတူပြန်လည်စုစည်းမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
Jose Alberto Leyva ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်သောခွေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ဗိုက်ကိုမည်မျှကြီးထွားစေသည်၊ သို့မဟုတ်သူမကိုယ်ဝန်ရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း
Jose alberto leyva သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘူဒိုတစ်ခုရှိသည်အောက်တိုဘာလ ၇-၉-၁၁ ရက်တွင်သူမ၏တောင်ပေါ်သို့တက်လာသည်။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ အစာကျွေးခြင်းအစီအစဉ်သည်သူမမှိုတက်ခြင်းကြောင့်သူမအားလုံးလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သူ၏ Boob အပြောင်းအလဲများမှာသိသာထင်ရှားမှုမရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသူမဆီးသွားနိုင်သည့်ဆီးသွားခြင်းနှင့်အိမ်အတွင်း၌ဆီးသွားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်သူမအတွက်သူမ၏နေရာရှိသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ လိုအပ်ချက်များနှင့်လမ်းလျှောက်ရန်သူမကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ထုတ်ယူသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ယူသောအခါ, ကတွန့်ဆုတ်ထွက်လာပါတယ်။ သူမကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား? ထို့အပြင်ဆီးကဲ့သို့ငါးသည်အနံ့ဆိုး။ ၎င်းသည်ကူးစက်မှုတစ်ခုလော။ အဆိုပါ vet ကအနံ့ဆိုးသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပြီးမကြာမီသူမအပူသို့ရောက်သွားသည်၊ သို့သော်သူမကို VET သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်တစ်ပတ်ခွဲကြာခဲ့သည်။
Alejandra Alvarado Trejo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာသံသယများစွာရှိပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမအစာစားချင်စိတ် မရှိ၍ ကျွန်ုပ်ခွေးအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်၍ ယခုကျွန်ုပ် xk ဂုဏ်ပြုလွှာမြောက်များစွာကိုသင်သိသည်။
Alejandra Alvarado Trejo အားပြန်ကြားပါ
ဘယ်လ်ဂျီယံသိုးထိန်းခွေး tervueren မွေး